Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:41 AM 19 comments:
သူ ..... သူဟာ
ထူးထူးချွန်ချွန် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ ......
ပေးဆပ် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့သူ ......
နွေဦးရဲ့ ညတစ်ည ( ၃၀.၃.၂၀၁၃ ) မှာ
သူဟာ မြင်လိုက်ရစဉ် ထို ထို ခဏ
သူဟာ ဂစ်တာကို တီးတတ်တယ် .....
သီကျုး ဖွဲ့ဆိုတတ်သေးပြန်တယ် .....
ကျွမ်းကျင် လိမ္မာ ပါးနပ်တယ် .......
Karl Maver ( ကားလ်မေဗာ ) ရဲ့
ပလေတိုရဲ့ နိဒါန်းလဲဖြစ်တယ် ......
အလှဆုံးသော နှင်းဆီ .......
သူဟာ ဒဏ္ဍာရီထဲက မြို့ပြတစ်ခုလို
ပြည့်နှက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါပဲ .......
ဖြူစင် နူးညံ့ရဲ့ ......
အပြစ်ကင်းစင် ချစ်ခင်ဖွယ်လဲကောင်းရဲ့ .....
တကယ်ပါ ........ ကျွန်မဘ၀မှာလေ
သူ့လောက် အစစ အရာရာ
မတွေ့ဖူးသေးဘူးလို့တောင် ထင်မိတယ် .....
မိုးနတ်ကြယ်စင် ( ကြယ်စင်စိုးသူလွင် )
Moi Dear Phay Phay Thu ,
This poem izz present4u .
I hope u will like it J
Plzz taste & enjoy it J
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 3:16 AM7comments:
Labels: ဖေဖေသူ့ အတွက်ရေးတဲ့ ကဗျာ
ငါ့ ရင်ဘတ်ထဲက ကဗျာတစ်ပုဒ်
သြော် ....... တကယ်ဆို
အ ရာ ရာ ဟာ ......
ငါ့ နှလုံးသွေးတွေနဲ့ ချင်းချင်းနီအောင်
ခြယ် မှုန်း ထု ဆစ် ခဲ့ ရ
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 5:15 AM7comments:
အသံသာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ငှက်ကလေးရေ .....
ဒီနေ့လဲ ကိုယ့်ကို နှုတ်မဆက်ပဲ
ငှက်ကလေး အိပ်မောကျသွားပြန်ပြီနော် .....
မီးစိမ်း နဲ့ မီးဝါလေးရဲ့
စီးဆင်းနေကျ ညခင်းတခုလို .....
လက်ပြ နှုတ်ဆက်ခွင့်ရှိရဲ့လား ?
ကိုယ် ရောက်ကန်းမတက်ချင်ပါဘူး .....
ရင်ထဲမှာ လစ်ဟာသွားတဲ့ ဝေဒနာ
အိမ်ပြန်လမ်းလေးက သိတယ် ......
ငှက်ကလေးနဲ့ ဝေးခဲ့ရတဲ့ ညဟာ
ပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့ ညပဲ ......
ငှက်ကလေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အရာရာကို
စွဲစွဲလန်းလန်း ရှိနေခဲ့တာလေး တခုရယ် .......
ကိုယ့် ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီးကတည်းက
ကိုယ် မဖတ်ချင်တော့တာ ......
ကိုယ် မခံစားနိုင်တော့တာ .......
ငှက်ကလေး ပြက်ရယ်ပြုချင် ပြုနေမယ် ......
ကိုယ့်မှာတော့ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်မို့
တခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုးနားလည်နေမိတဲ့ အဖြစ်ရယ်ပါ......
တခါလောက်ပဲ ငှက်ကလေး ငဲ့ကြည့်ပေးပါ .....
အလွမ်းတွေ နင့်နေတဲ့ အချစ်ဘူတာမှာ
ငှက်ကလေးတစ်ယောက် ကြည့်တတ်ရင် မြင်မှာပါ ......
ငှက်ကလေး သိလား ?
အတ္တဟိတကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့သူ .....
ရှေးရှုပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူ .......
လမ်းပြအလင်းရောင်လို ချိတ်ဆွဲလို့ .....
ရို့ကျိုးခြင်း ဆိုတဲ့ ဂါရ၀တရားကို
ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ထွန်ယက်လို့ .......
ငှက်ကလေး ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေကို
အလိုအလျောက် သိမြင်နားလည်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ .....
ကိုယ့်ဘ၀ကို ပဲ့ပြင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူ ......
ငှက်ကလေးသာ ကိုယ့်အနား ရှိခဲ့မယ်ဆို
ဘယ်လို ခေတ်ပေါ် အီလက်ထရောနစ်
ပစ္စည်းမျိုးကိုမှ ကိုယ်မလိုချင်တော့ဘူး ......
ကိုယ် မမက်မောတော့ဘူး .......
ကိုယ့်ကို ရွတ်ပြပါလား ?
အို ......... ကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ
အုတ်မြစ်ချလို့ ကိုယ်ဟာ လေထဲ
တဆိတ်လောက် ..... ဟိုအဝေးတစ်နေရာကနေ
ကိုယ့်ကို ငှက်ကလေး လှောင်ပြောင်
ရယ်သွမ်းသွေးမနေဘူး မဟုတ်လား ?
မကြင်နာတတ်တာ ကိုယ်သိတယ် ......
အဲဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အဖြေကိုလဲ
ငှက်ကလေး ကိုယ်တိုင်ပဲ သိမယ် .......
ရက်စက်တတ်သူလို့ ကိုယ် မစွပ်စွဲပါရစေနဲ့ .....
အသဲခွဲတတ်သူလို့လဲ ကိုယ် ကင်ပွန်းမတပ်ချင်ပါဘူးကွယ် .....
အဆင်ခြင်မဲ့တဲ့ ကိုယ့် နှုတ်ထွက် စကားတစ်ခွန်းကြောင့်
ညှိုးနွမ်းသွားမှာ ကိုယ်စိုးတယ် .........
ယုတ်လျော့သွားမှာ ကိုယ်ကြောက်တယ် ......
ဘယ်သောအခါမှ မပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး .......
ကိုယ့်အတွက် အမြဲစိမ်းသစ်တော .......
အချစ် = ငှက်ကလေး = အမြဲစိမ်းသစ်တော
တွက်ချက်နေမိသူဟာ ကိုယ်ပေါ့ ......
ငှက်ကလေး သို့ .......
ငှက်ကလေး အတွက် .......
နာရီလက်တံ တချက်ချက် မြည်သံကြားမှ
ပစ္စုပ္ပန်ဟာ စိတ်နဲ့ခန္ဓာမှာ ကပ်တယ် ......
ရထားဥသြသံ ခပ်သဲ့သဲ့ ........
အင်း ....... ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီညလဲ
( ဒီငှက်ကလေးသို့ ဆိုတဲ့ တမ်းချင်းပဲ ခေါ်မလား
ကဗျာလို့ပဲ သတ်မှတ်မလား အဲဒိ ပို့စ်လေးကို မိုးနတ် မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဝိုင်းထဲက စီနီယာ ဂျုနီယာ
မောင်နှမများအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးဖြစ်ပါတယ် .....
မိုးနတ် ဘလော့ဖက်ကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်သေးတဲ့အတွက်တော့
ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရှင် ..... အားလုံးကပျောက်နေတယ်လို့
စီပုံးမှာရော ဖဘမှာတွေ့ရင်ရော သတိတရမေးကြတယ် ...
အဲဒါကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဖဘမှာပဲ
လမ်းသလားနေပြီး ဘလော့ဖက်ကို မလာနိုင်တာကိုတော့
မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲ တောင်းပန်ပါရစေ .... မိုးနတ် အလုပ်တွေ ဘယ်လိုမှမအားသလို ရှေ့လျှောက်ပြီးလဲ ဒိထက်ပို
အလုပ်များရဖို့ ရှိပါတယ် .... နောက်ပြီး ဒီနှစ်မကုန်ခင် မိုးနတ် ကြိုးစားပြီး ၀တ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ ရှိတယ် .... အဲဒါလဲ သိပ်ကို
အာရုံထားပြီး ကြိုးစားနေတာမို့ နားချိန် အားချိန်
မရှိလောက်အောင်ပါပဲ ... သတင်းအဆက်အသွယ်
မပြတ်စေဖို့ရယ် .... အချိန်ကုန်သက်သာစေဖို့ရယ် ရည်ရွယ်ပြီး ဖဘကိုတော့ အမြဲဝင်ဖြစ်ပါတယ် ..... အဲဒါလေးကိုတော့
နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ဘော်ဘော်တို့ရယ် ....
အားလုံးကို အရမ်းပဲ သတိတရရှိနေပါတယ် ...
အဲ နောက်တော့လေ .... ပြောအုံးမလို့
ဒီ ငှက်ကလေးသို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အမရည်ဝေ ရေးဖြစ်တဲ့
ငှက်ကလေး စီးရီးလေးတွေ မှတ်မိကြအုံးမယ် ဖတ်ဖူးကြမယ်
ထင်ပါတယ် ..... ခု မိုးနတ်ကလဲ ငှက်ကလေးသို့ ဆိုတော့
အားလုံး မျက်စိလည်သွားမှာစိုးလို့ပါ .... ဒီကဗျာလေးကို
မိုးနတ်ရဲ့ တကောင်တည်းသော ငှက်ကလေးအတွက်
ရည်ရွယ်တာမို့ မမရည်ဝေကို ခွင့်တောင်းပြီးမှ
ငှက်ကလေး သို့ လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါ ......
သူ့ကိုလဲ ငှက်ကလေးလို့ပဲ ရင်ထဲက မြတ်မြတ်နိုးနိုးခေါ်မိတာမို့
တခြားနာမ်စားလဲ မသုံးချင်တော့လို့ပါ ...... အဲဒါကြောင့်
အမရည်ဝေကို ခေါင်းစဉ်တူနေတဲ့အတွက် ခွင့်တောင်းပြီးမှ
ဒီကဗျာလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ် ................. အဲဒါလေးလဲ
ပြောပြချင်တာပါ ...... အားလုံးပဲ မိုးနတ်ရဲ့ ငှက်ကလေး သို့
ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး တခုခုခံစားမိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်
မိုးနတ် ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ ........................................... )
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 8:41 AM 12 comments:
Labels: ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှု ရသစာစုလေးများ
အဖော်ဝေးတဲ့ ဒီလိုည .....
တိုး တိုး ဖွ ဖွ .......
ငါ့ စိတ်ကို လာလာ ကလိတယ်
ရင်ခုန်လိုက်ရပါဘိ အမိရယ် ....
ကြည့်တယ် ...... သူလေ လူကို
ပြိုး ပြိုး ပြက် ပြက် ......
ငါ့ ကိုယ်ပေါ်ကို ရွှန်းရွှန်းစက်စက် .....
လှရက်လေခြင်း လမင်းရယ် ......
ညခင်းဝယ် ဖြူလွလွ သူ့အဆင်း ......
ငါ ငြင်းလို့ မရအောင်
ဆွဲဆောင်နေလိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း ......
အဖော်အဖြစ်နဲ့ ခူးဆွတ်ပေးချင်မိရဲ့ .......
သြော် ....... ငါ့မှာတော့
ကျူးလွန်ရဖို့ ၀န်မလေးမိဘူးကွဲ့ .......
သွဲ့ သွဲ့ နွဲ့ နွဲ့ ...... မင်းရဲ့အလင်း....
ဖမ်း စား ကျီ စယ် လမင်းရယ် .....
ရှောင်ပြေးမယ် ဘယ်အခါ စိတ်မကူး
ရူးတဲ့ ဒီလူမှာ သေအံ့မူးမူး .....
ဝေဒနာဆူး စူးနေတဲ့ ဒီညအတွက်တော့
ရှိန်း ရှိန်း မြ မြ ........
၀င်း ၀င်း ပ ပ ......
ငါ့ကောင်းကင်မှာ သာတဲ့လ .......
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:46 AM 11 comments:
မြင့်မြတ်တဲ့ သစ္စာတရားတွေ .....
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ .......
တစ်ခါလောက်တော့ ငါတွေ့ဖူးချင်မိရဲ့ .....
အရာအားလုံးကပဲ ငါနဲ့ ဝေးနေတာလား ?
ငါကပဲ အရာအားလုံးနဲ့ ဝေးနေတာလား ?
ဒီည အိပ်လို့ ပျော်မှ ပျော်ပါ့မလား ?
ဇွတ်တိုး မျှော်မိတဲ့ ငမိုက်သား
သြော် ..... ဒီဒုက္ခကရော
ကျွတ်မှ ကျွတ်ပါ့မလား ?
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:44 AM 21 comments:
စာတင်လောက်တဲ့ အချစ်မျိုး .....
ဒါကို.... နှင်ရက်စရာ ထင်
တမင်ရှောင်ခွာ စိမ်းပေမဲ့လို့ .....
ရင် ခုန် စ ကတည်းက
သည်း ဦး သ ခင်မို့ ......
( ကဗျာရေးပြီးလို့ ခေါင်းစဉ်ဘာပေးရမလဲ စဉ်းစားနေတုန်းးးးး5သုခုမက လာတဲ့ ဇာတ်ကား
နံမည်လေး နှစ်သက်မိလို့ ယူပြီးပေးဖြစ်ပါတယ်....... ကဗျာလေးနဲ့ လိုက်ရဲ့ မဟုတ်လားရှင် :) )
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 8:04 AM 20 comments:
ငါ့ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စပြီးမြင်ဖူးလိုက်တာပါပဲ ......
ငါ့ရင်ဘတ်ထဲကို ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ စီးဆင်းသွားတယ် .....
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ နေရာယူခဲ့ပြီမို့
အခုဆို ...... ....... ........
ငါ မင်းကို မေ့ဖို့လို့
အတော့်ကို ခက်လို့နေပြီပေါ့ ......
ရှည်လျားတဲ့ ငါ့ရဲ့ စွဲလန်းမှုတွေကို
မင်းလေးပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ချစ်သူ .......
နွေးထွေးမှုကို ခံယူဖို့ ငံလင့်နေသလိုမျိုး ......
ငါကလဲ ငါချစ်တဲ့ မင်းရဲ့လက်တွေနဲ့
ငါ့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့
ငါ့ အသည်းတံခါးပေါက် မင်းအရောက်
ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရေ .......
ဖြတ်သန်း ကျော်လွန်ပါရစေ .......
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:02 AM 15 comments:
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:57 AM 40 comments:
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:08 AM 20 comments:
မလေး ခင့်ဆီ ကိုယ်ရောက်ခဲ့တယ်
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:38 AM 11 comments:
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 9:19 AM 15 comments:
ယောကျာ်းပီသတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူကို ငါ့ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စပြီးမြင်ဖူးလိုက်တာပါပဲ ...... ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ မင...
ည ...... လေပြေတွေ ဆော့ပြေး အဖော်ဝေးတဲ့ ဒီလိုည ..... တိမ်ညိုတွေ အကွယ်ကနေ တိုး တိုး ဖွ ဖွ ....... ရိုးတိုးရွတ ဖြစ်အောင် ငါ့ စိတ်ကို...
သမီးလေး ..... အမြဲလိုလို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ တယုတယရှိခဲ့ရတဲ့ သမီးလေး ..... ကိုးလ လွယ်ပြီး ဆယ်လ မဖွားခဲ့ရပေမဲ့ ကျွန်မလက်နဲ့ ကို...
ဒီည ကြယ်စင်တွေ ကြွေဆင်းတဲ့ သကာလ ခြေသံဖွဖွ ကြားလို့ လှည့်ကြည့်မိတယ် ဟော.........ကျုပ်အနားကို သူမ ရောက်နေပါရောလားကွယ် ...
ရဲရင့်ခြင်း လှံကိုကိုင်စွဲ တိုက်ပွဲဆီ ရဲရဲ ငါချီတက်ခဲ့တယ် နောက်မဆုတ်ဘူး အမေ့သားငယ် ဘယ်သူ့ ၀မ်းကြာတိုက်က မွေးဖွားခဲ့တာမို့လဲကွယ...
Strawberry Sweet Rolls with Dark Chocolate Drizzle
- နာကငျြတဈနတေ့ာ -